Mayelana Nathi - Shandong Lu Young Machinery Co., Ltd
I-Shandong Lu Young Machinery Co., Ltd. yasungulwa ngo-July 1996. Sitholakala e-shandong provice.Sangenisa ubuchwepheshe obuphambili bokukhiqiza kanye nethimba le-R&D livela e-Korea ngo-2001 futhi sakha imboni yethu yesithathu yokukhiqiza umshini we-lathe wase-swiss.Singase umkhiqizo phezu 1000 amasethi umshini Cnc imishini unyaka owodwa.Amathuluzi ethu omshini we-cnc athunyelwe emazweni angaphezu kuka-40 futhi athola impendulo enhle.
Siphethe cishe ama-woker angama-500 nonjiniyela abangama-40, ngaphezu kuka-50000㎡ sisebenza isikhala sesitolo nendawo yehhovisi engu-1000㎡.Ithimba lethu lonjiniyela linolwazi olucebile lokukhethwa kwemishini kanye nokwakhiwa kwenqubo, singakunikeza isixazululo esichwepheshile esisekelwe ezintweni zakho zokusebenza ngokushesha nangokukhululekile.
Yonke imishini yethu ye-CNC ihambisana nezinga lekhodi yamazwe ngamazwe ye-ISO, futhi ilwela ukuthuthukiswa ngesithunzi, nenjongo yekhasimende kuqala.Ukufinyelela imikhiqizo yekhwalithi enhle, isevisi ecabangelayo, ukulethwa okufika ngesikhathi, izintengo ezifanele, nokuhlinzeka abasebenzisi ngemikhiqizo esebenza kahle, inkampani ithandwa abathengisi nabasebenzisi ekhaya naphesheya ngesithunzi esihle nesevisi enhle kakhulu.
NGAPHEZU KWEMINYAKA ENGU-20 OKUNGEZESIFUNDAZWE EGXILE EZIMshini ze-CNC
I-Shandong Lu Young Machinery Co., Ltd. yasungulwa ngoJulayi 1996, etholakala e-shandong provice.Kungeniswe ubuchwepheshe bokukhiqiza obuthuthukisiwe kanye nethimba le-R&D elivela e-Korean ngo-2001. Kuthekeliswe amazwe angaphezu kuka-40 futhi bathole impendulo enhle.Yonke imishini iphasise ukuqinisekiswa kwe-European Union CE futhi iqinisekiswe ku-ISO 9001.
Inkampani yethu inamamodeli emishini angaphezu kuka-50, okuhlanganisa umbhede oyisicaba nombhede othambekele we-CNC lathe, i-axis engu-3, ​​i-axis engu-4, umshini wokugaya we-CNC we-5-axis, umshini we-siwss we-cnc lathe, umshini wokusika ojwayelekile, umshini wokusaha.
1. Ukucushwa kwekhwalithi ephezulu
Izingxenye eziyinhloko zithengwa kwamanye amazwe noma izakhi zomkhiqizo ezidumile zasekhaya, njengohlelo lwe-Japan FANUC, i-Japan NSK bearing noma i-German FAG bearing, i-German Siemens controller system, i-French Schneider, i-Taiwan ROALY spindle, i-OKADA auto Tool Changer, i-Taiwan Hiwin linear guide way, isilawuli se-GSK. uhlelo njll.
2. Amandla e-R&D Aqinile
Sinonjiniyela abangama-40 esikhungweni sethu se-R&D, bonke banolwazi oluthe xaxa kulo mkhakha.
Kunezinto zokuhlola nokuhlola ezingu-45, amahora angu-48 ukulungisa ukuhlolwa kokucubungula umthwalo ogcwele unhlangothi, kusetshenziswa imishini yokuhlola ukunemba ephezulu emhlabeni efana nomshini wokulinganisa ohlanganisa ezintathu, i-British ERNISHAW laser F interferometer, kanye nesilinganisi esinamandla se-SIGMA saseJapane qinisekisa ukulawula okunembile kwayo yonke imininingwane yethuluzi lomshini.
Ukucushwa ngokwezifiso, ukubukeka kuyatholakala.Siyakwamukela ukwabelana ngombono wakho nathi, masisebenze ndawonye ukwenza impilo ibe yindalo kakhudlwana.
Imikhiqizo yethu yonke idlula Isitifiketi se-CE, futhi imboni yethu idlula i-ISO9001 Isitifiketi Sekhwalithi.Imishini yethu isithunyelwe emazweni angaphezu kwama-40.Samukela wonke amakhasimende nabangane bezovakashela imboni yethu!
Mayelana namandla ezobuchwepheshe, sinabasebenzi abachwepheshile bocwaningo nentuthuko, abangahlangabezana nazo zonke izidingo ezihlukene kwezobuchwepheshe nokukhiqiza.Samukela ukucushwa ngokwezifiso, singenza umshini ngokwesicelo sakho.Uma unesicelo esikhethekile, ithimba ledizayini lochwepheshe lingakunikeza ukucushwa okufanele kakhulu ngakunye.
Ngokuthengisa bonke bangabathengisi abangochwepheshe abangakusiza ukuxazulula izinkinga ekuthengeni nasekuthengeni ubuchwepheshe obuhlobene namathuluzi e-CNC nemishini yokuhlola.Imikhiqizo yethu ithengiswa kokubili ekhaya naphesheya, futhi idume kakhulu emhlabeni jikelele.